Antenimiera roa tonta : mampidina an-dalambe ny tsy fisian’ny mpanohitra ara-dalàna | NewsMada
Adihevitra be ny amin’ny tsy fisian’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona. Tsy mahay mifanaraka ny samy mpanohitra? Ny ao anatiny na ny ety ivelany… Na mbola kely hery ny mpanohitra, na tsy azo antoka. Misy milaza fa voatery ho ny Tim, Mapar, AMMM… ihany ve ny mpanohitra?
Aiza ny sakana na avy amin’iza ny lesoka? Nefa izay rehetra mitranga sy ataon’ny mpitondra, saika misy manohitra avokoa. Mila mazava izay tena anjara toeran’ny mpanohitra amin’izany. Hatramin’izao, lazaina tsy mbola mivoaka ny didy fampiharana ny lalàna mifehy ny fanoherana. Tsy fahatokisan-tena ny an’ny mpitondra?
Mety eo koa ny tsy fahasahiana mamoaka ny lisitry ny antoko na vondrona mpanohitra. Nefa izay mihetsika rehetra, indrindra izay mitady hanao famoriam-bahoaka: soketaina ho manohintohina filaminana, manongam-panjakana… Aiza no ahazoan’ny mpanohitra maneho hevitra an-kalalahana sy amim-pilaminana amin’izany?
Mibahan-toerana ny antokon’ny fitondrana
Tsy misy mpanohitra ara-dalàna eny amin’ny Antenimiera roa tonta, ataon’ny antokon’ny fitondrana ampihimamba ny haino aman-jerim-panjakana, sakanana ny famoriam-bahoaka ankalamanjana… Mbola amin’ny haino aman-jery tsy miankina ihany no aloha ahazoan’ny mpanohitra mihetsika sy maneho hevitra.
Ho tonga hatraiza izay fahabangan-toeran’ny mpanohitra izay? Eny, na misy ihany aza ny fanoherana etsy sy eroa amin’ny lafin-javatra na sehatra sasany: fandrobana sy fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena; ny tsy fahatokisana mpitandro filaminana sy fitsarana, ka mahatonga fitsaram-bahoaka; fitakiana ireo Nosy malagasy manodidina…
Misy ny manahy fa manosika ny mpanohitra hidina an-dalambe ny raharaha, raha tsy mazava sy voalamina araka ny lalàna. Hisy ve ny fahamarinan-toerana sy fitoniana politika, amin’izao tsy fijoroan’ny mpanohitra ara-dalàna eny anivon’ny Antenimiera roa tonta izao? Mba tsy ho ao anaty fitaintainana sy fifampiandrasana kendry tohina lava…